Mourinho: Kaka Waxa Uu Igu Dhaliyey Inaan Dib U Fikiro - jornalizem
Mourinho: Kaka Waxa Uu Igu Dhaliyey Inaan Dib U Fikiro
Tababaraha Real Madrid ayaa sheegay in saddexleydii uu Kaka ka dhaliyey xalay kooxda Millonarios uu ku keenay in uu dib u fikiro.
Xiddigan reer Brazil ayaa ka faa’ideystay kulanka lagu sharfayay halyeygii hore ee Madrid Lafredo di Stefano waxana uu xusuusiyay Mourinho in uu awood u leeyahay in uu qeyb ka noqdo kooxda ciyaareysa xilli ciyaareedkan.
Waxa ay ahayd kulankii ugu horeeyey ee uu safto Kaka xilli ciyaareedkan waxana uu tababaraha reer Portuqal uu qiray shirka jaraa’id ee uu qabtay kulanka kadib in uu aad ula yaabay waxa uu arkay.
Isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu sheegay: “Kaka si wanaagsan ayuu u ciyaaray, qaab ciyaareedkiisa iyo kan kooxdaba waxa uu ahaa mid suurtogal ah waayo waxaan soo safay koox adag. Isagana waxa uu sameeyey dadaal dheeraad ah kaasoo ah kan ay sameeyaan ciyaartoyda aan ciyaarin illaa iyo hadda.
“Xaqiiqdii, marka ay soo bandhigaan dadaalkan iyo horumarka ciyaaryahanada qaar waxa uu tababaraha yeeshaa kalsooni dheeraad ah inuu ku qabo waxana uu ku soo daraa kooxda kulamada rasmiga ah.
“Kaka iyo qaar kalaba waxa ay soo bandhigeen awoodooda taasoo tababaraha maskaxdiisa gelisa magacyadooda marka uu waqigu yimaado inuu go’aan gaaro, waxayna igu dhalisey in aan dib u fikiro,”ayuu Mourinho xaqiijiyay.
Isagoo ka hadlayay kulankii xalay Mourinho ayaa sheegay in kooxda reer Colombia aysan u ciyaarin sidii hore loogaga bartay.
“Waxaan daawaday labo video oo kooxdaas ah ciyaartoydoodana waa ay ka wanaagsanaayeen waxa ay xalay soo bandhigeen. Balse annaga waxaan u ciyaarnay sidii aan koobka ugu guuleysan lahayn.
“Waan weerarnay dhaqsana goolal ayaan u dhalinay iyagana si dabacsan ayay u ciyaareen mana muujin wax dhiiranaan ah wax fursado ahna ma aysan abuurin.
“Waa ceeb siddeed gool waana wax badan, balse waxaan ogahay inay yihiin koox intaa ka wanaagsan”.
Kooxda Real Madrid ayaa xalay waxa markii ugu horeysey u saftay labo ciyaaryahan oo kala ah Derik Osede iyo Mario Hermoso.